Global Voices teny Malagasy » Mitombo Ny Fihenjanana Eo Amin’ny Faritra Tsy Azo Dikaina Ao Moldova-Transnistria · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 19 Mey 2013 5:05 GMT 1	 · Mpanoratra Diana Lungu Nandika miora
Sokajy: Eoropa Afovoany & Atsinanana, Moldavia, Ady & Fifandirana, Fanoherana, Fitantanam-pitondrana, Lalàna, Mediam-bahoaka, Politika
Nitombo ny fihenjanana nandritra ny alin'ny 26-27 Aprily tany amin'ny Faritra Tsy azo dikaina  ao amin'ny Repoblikan'i Moldova, araka ireo tatitry ny media Moldovana . Natsangana io Faritra Tsy Azo Dikaina io tamin'ny faran'ny Adin'i Transnistria (Martsa-Jolay 1992), fifandirana izay nikendry ny hamarana ireo hetsi-panoherana mpitaky fisintahana tany amin'ny faritra Atsinanan'i Moldova ary hamerina ilay repoblika mpisintak'i Transnistria .
Ny herinandro lasa teo, nametraka toby roa fanarahamaso tsy nifampieràna eo anelanelan'ny vohitr'i Varniţa  (kaominina izay mbola eo ambany fifehezan'ny governemanta Moldovana) sy ny tanànan'i Bender  (eo ambany fifehezan'ireo manampahefana mpisintaka ao Transnistria ) ireo manampahefana Transnistriana. Izany dia nitarika fifandonana teo amin'ireo olom-pirenena Moldovana, izay niezaka hanala ireo toby roa ireo, sy ny miaramila Transnistriana, izay nirotsaka an-tsehatra hanakana azy ireo. Nofaranan'ny Komision'ny Fanaraha-maso Miray , izay rafitra fiasa napetraka hanaraha-maso ilay Faritra Tsy Azo Dikaina, ankoatra ny andraikiny hafa, izany fifandirana izany ora vitsy taty aoriana. Raha nilaza i Transnistria fa natsangana ireo toby roa fanarahamaso ireo mba hiadiana amin'ny varotra risoriso, manazava ireo antony vitsivitsy mahatonga ny fiakaran'ireo fihenjanana ny fanehoankevitra avy amin'ireo Moldovana mpampiasa aterineto.
Mino i Dragoș Galbur fa fiketrehana fibodoana tanin'olona izany. Manoratra  izy [ro]:
Ankoatra ny Facebook, nangina tanteraka ny tany [Chișinău , renivohitr'i Moldova]. Tsy nahitàna fihetsika na kely aza, na iray aza tsy nisy. Tsy nisy olona nandray ny antso. Raha nisy tifitra tsy voatandrina avy aminà mpandray anjara , dia inoana marimarina tokoa fa niverina ny zava-nitranga tamin'ny 1992. Iza anefa no hiraharaha e? Misy ady goavana any Chișinău, ho an'ny vola sy ny fahefana.
Manao fanoharana amin'ilay krizy politika goavana nihatra amin'i Moldova ilay mpitoraka bilaogy. Rehefa very  governemanta izy tamin'ny voalohandohan'ity taona ity, nahita ny fandroahana ny mpitondra tenin'ny parlemanta ry zareo ireo Moldovana tamin'ny herinandro lasa teo.
Nisy fitsapan-kevitra vao haingana natao tao Moldova (Aprily 2013) nanambara  fa 81 isanjaton'ny vahoaka nanaovana ilay fitsapan-kevitra dia mino fa tsy voatantana araka ny fanirian'ny vahoaka ny firenena ary 84 isanjato dia manamafy fa mivarina an-kady ny firenena; 82 isanjato tamin'ireo namaly ihany koa no tsy faly amin'ny fomba fandaminan'ny fitondram-panjakana ny fifandirany amin'i Transnistria.
Dradradradrain'ilay mpanao gazety sady mpitoraka bilaogy Andrei Cibotaru ihany koa izany tsy hafaliana izany, izay mihevitra fa mendrika ho antsoina ho Alliance for the Eternal Intermission (Firaisana ho an'ny Tsy Fanarahan-dalàna Mandrakizay) ny Alliance for European Integration  (AIE) , noho ny fiadian-tseza tsy an-kiato, izay nahaela ny tsy fisian'ny filoham-pirenena tao Moldova nandritra ny roa taona teo ho eo, ary avy eo tsy nisy praiminisitra, ary ankehitriny dia nanaraka ihany koa ny mpitondra tenin'ny Parlemanta.
Manoratra  i Cibotaru [ro]:
Mety ho tranga azo heverina ihany koa ny fiverenana ara-politikan'ny Antoko Kaominista .
Raha nanontaniana momba ny olona hofidiany raha sendra misy fifidianana parlemanta ny Alahady manaraka, 32,5 isanjaton'ny namaly tamin'ny fitsapan-kevitry ny Aprily no nifidy ny Antoko Kaominista, izay nifanandrina tamin'ireo antoko mitondra amin'izao fotoana izao, izay nahazo araka izao manaraka izao: 12.6 isanjato (ny Antoko Demokratika Liberaly ), 10.5% (ny Antoko Liberaly ) ary 6,8% (ny Antoko Demokratika ).
Manoratra  [ro] ilay mpanao gazety sady mpitoraka bilaogy Vitalie Cojocari fa “very mandrakizay i Transnistria ho an'i Moldova”:
[…] Ny olona vendrana ihany ny tsy mahita ity. Transnistria dia fanjakana iray mahaleontena ary tsy mila ny fankatoavan'izao tontolo izao, raha mbola i Renimalala Rosia no tontolo misy azy. Tsy misolotena an'i Moldova i Transnistria ary ireo mora fitahina avy amin'ireo ONG avy any Chișinău ihany no mbola mihevitra fa Moldovana ny tany eo ampita [ny Nistru ]. Tsy misy azo ambara ankoatra izany. Roapolo taona taorian'ny ady, nisy taranaka vaovao nihalehibe tao Transnistria ary ho azy ireo dia mazava fa raha misy i Moldova, misy koa i Transnistria ary fanjakana roa samy hafa tanteraka ireo roa ireo.
Mandritra izany fotoana izany, nihena ny fanohanana malaza ny hidiran'i Moldova ho isan'i Eoropa nandritra ireo taona vitsy lasa izay. Mampiseho  ny fitsapan-kevitra tamin'ity taona ity fa ny fomba fijerin'ny vahoaka sy ny fanohanany dia mitsinjara mitovy amin'ny fidirany ao anatin'ny Firaisambe Eoropeana (51 isanjato) sy ny Firaisambe Rosiana (52 isanjato).
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2013/05/19/48288/
 Faritra Tsy azo dikaina: http://en.wikipedia.org/wiki/DMZ#Europe
 tatitry ny media Moldovana: http://politicom.moldova.org/news/breaking-news-clashes-between-moldovan-civilians-and-transnistrian-militia-236563-eng.html
 Adin'i Transnistria : http://en.wikipedia.org/wiki/War_of_Transnistria
 Komision'ny Fanaraha-maso Miray: http://www.gov.md/slidepageview.php?l=ro&idc=609
 fandroahana : http://www.themoscowtimes.com/news/article/moldovas-parliament-sacks-speaker-as-crisis-deepens/479352.html
 Alliance for European Integration: http://en.wikipedia.org/wiki/Alliance_for_European_Integration
 Antoko Kaominista: http://en.wikipedia.org/wiki/Party_of_Communists_of_the_Republic_of_Moldova
 Antoko Demokratika Liberaly: http://en.wikipedia.org/wiki/Liberal_Democratic_Party_of_Moldova
 Antoko Liberaly: https://en.wikipedia.org/wiki/Liberal_Party_(Moldova)
 Antoko Demokratika: https://en.wikipedia.org/wiki/Democratic_Party_of_Moldova
 resy lahatra : http://vox.publika.md/media/politica/russian-army-go-home-489741.html